February 19, 2020 - MM Live News
ငွမျးခညျြတဲ့ကွိုးပွဇာတျထဲက ကလေးကွောငျ့ ကြှနျးလှရောကျလာတဲ့ အမပေု ကလေးပြောကျရှာပုံတျော
ငြမ်းချည်တဲ့ကြိုးကြောင့် ကျွန်းလှရောက်လာကြသူများ (သို့မဟုတ်)ကလေးပျောက် ရှာပုံတော် ကျွန်းလှမြို့ ၊ သစ်ရာမြိုင် အ.ထ.က စုံညီပွဲတော်မှာ ဒီနှစ် ကျောင်းသားလေးတွေ တင်ဆက်ခဲ့ တဲ့ ငြမ်းချည်တဲ့ကြိုးပြဇာတ်က ကြည့်ရှု့သူ (13)သန်း ဝန်းကျင်ထိရှိခဲ့ပြီး တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာထိ ပေါက်ခဲ့တယ်လိုဆိုရမည်။ မနှစ်က ခွင့်လွှတ်ပါဆရာကလည်း ကြည့်ရှု့သူ သန်း (20) ကျော်ထိရှိခဲ့ပြီး ကျတော်ဆီ ဖုန်းဆက်ကြသူများလည်း အလွန်များခဲ့သည်။ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်း ကလေးတွေ တော်တဲ့အကြောင်း ဆရာ ဆရာမတွေကို ချီးကျူးကြောင်း ရိုက်တာ မိုက်တဲ့အကြောင်း အစုံပါပဲ။ ကိုရိုက်ထားတာလေး အားပေးကြလို့ ဖုန်းဆက်ခဲ့သူတိုင်းကို မအားလည်း လေးစားစွာ ပြန်ဖြေပေးခဲ့ပါသည်။ဒီနှစ်ငြမ်းချည်တဲ့ကြိုးကို ကြည့်သူများဟာ ရှု့ထောင်တွေ မတူကြသလို ကျတော့်ဆီကို ဖုန်းဆက်ကြသူများဟာလည်း ပုံစံမတူကြပေ….. ထိုအထဲမှ ထူးထူးခြားခြား ကွဲပြားနေတာကတော့ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ၊ တောင်ညောင်ကုန်း၊ကျွန်းတုန်းကျေးရွာ […]
စိုးပွညျ့သဇငျကိုယျတိုငျ သကျနျးပနျးကိုငျကာ တကျရောကျအားပေးခဲ့တဲ့ ကြောကျသူဌေးလေး ကိုအေးကြျောရဲ့ သိနျထောငျခြီကုနျတဲ့ အလှူတျောမဂျလာပှဲ
သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင်ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ ကျောက်သူဌေးလေး ကိုအေးကျော်ရဲ့ သိန်ထောင်ချီကုန်တဲ့ အလှူတော်မဂ်လာပွဲ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင်ကိုယ်တိုင် သက်န်းပန်းကိုင်ကာ တက်ရောက်အားပေးခဲ့တဲ့ ကျောက်သူဌေးလေး ကိုအေးကျော်ရဲ့ခြိမ့်ခြိမ့်သဲအလှူတော်မဂ်လာပွဲ။ မဂ်လာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ဒီကနေ့ဖော်ပြချင်တာလေးကတော့ စစ်ကိုင်းတိုင်း ရွှေဘိုခရိုင်ထဲက ရွာလေးတရွာမှာ ကျင်းပတဲ့ အလှူတော်မဂ်လာပွဲကို ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင် တက်ရောက်အားပေးတဲ့ အကြောင်းလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖားကန့် လုံးခင်းဘက်မှာ ကျောက်သူဌေးဖြစ်နေတဲ့ ကိုအေးကျော်ဟာ ဗုဒ္ဓဘါသာ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း မိမိစီးပွားရေး ပြေလည်တာနဲ့ ဘုရားတည်ကျောင်းဆောက် ရှင်ပြုနားသ လုပ်လေ့ ရှိကြတဲ့ အတိုင်း ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ ခြိမ့် ခြိမ့်သဲသဲ အလှူပဲကြီးတခု ကျင်းပဖို့ အားခဲထားတာ ကြာပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာတော့ မိမိရဲ့ အဖြစ်ချင်ဆုံး ဆန္ဒ မိဘနှစ်ပါးကို အမြတ်ဆုံးကျေးဇူးဆပ်တဲ့ လုပ်ရပ်တခုအဖြစ် […]
စိတျပူလို့ သတိထားနတေဲ့ကွားက ရုတျတရကျ ကိုယျဝနျရသှားနိုငျတဲ့ အကွောငျးရငျး
*သတိထားနေတဲ့ကြားက ကိုယ်ဝန် ရှိသွားနိုင်တယ်နော် ** ဗိုက်ကိုက ကြီးပဲ ကြီးနိုင်လွန်း … မလိုချင်ပါဘူးဆို လာပဲ လာနိုင်လွန်းလို့ စိတ်ညစ်ရသူတွေအတွက် ဟောဒီမှာ မမတို့ သတိမထားမိတတ်တဲ့ ဟာကွက်လေးတွေ။ သတိမမူ ဂူမမြင်တဲ့။ နမော်နမဲ့နဲ့ ဂူဝင်မတိုက်မိအောင် ဒါလေးတွေ ရှောင်နော်။ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ ကလေးမရတတ်ပေမယ့် နို့တိုက်နေတာချည်းကိုပဲ အားထားပြီး ဘာမှမသုံးဘူး ဆိုတာတော့ ဟုတ်သေးဘူးနော့်။ ကလေးမွေးပြီး နှစ်ပတ်အတွင်း ချစ်စရာသားဥလေးက ကြွေပါတယ်လို့၊ ကလေးဆိုးလေးကို ထိန်းချင်ရင် ၄၅ ရက်ပြည့်တာနဲ့ သုံးလခံဆေး ထိုးကြပါ။ ဆေးသောက်ပြီး သန္ဓေတားတာတော့ ဟုတ်ပါရဲ့။ ဆေးသောက်နေတုန်း နေမကောင်းလို့ ပဋိဇီဝဆေး သောက်ရရင်တော့ အခြေအနေမလှဘူး မှတ်ပါလေ၊ ပဋိဇီဝဆေး သောက်နေရတော့ ဟိုဆေးကို ကျော်ရင်းခွရင်း ဗိုက်ကြီးသွားတတ်လို့ပါ။ ဗိုက်နာ၊ ဝမ်းပျက် […]
တရားမြှတမှု ရရှိရေးအတှကျ ပွညျသူတှေ ဆန်ဒပွ တိုကျပှဲဝငျတော့မညျ…
February 19, 2020 February 19, 2020 MM Live News
ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ (လမ်းပေါ်တက် ဆန္ဒပြတာဟာ အစိုးရကို အခက်တွေ့အောင် လုပ်တာ) ဆိုတဲ့ အမြင်ပဲ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီ (တချို့) လူတွေပဲ တချိန်က ဆန္ဒပြခြင်းဟာ သူရဲကောင်း အလုပ် လို့ မြင်ခဲ့ကြဘူးတာ။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလို မမြင်ဘူး။ ဆန္ဒပြခြင်းဟာ နိုင်ငံသားတဦးရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပဲ။ လွတ်လပ်ခွင့်ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီလို လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာ အဲဒီ နိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေကိုတော့ ကျော်လို့ မရဘူး။ တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ ညီညွတ်တယ်ဆိုရင် ကျောင်းသားလည်း ပြခွင့် ရှိတယ်။ အလုပ်သမားလည်း ပြခွင့် ရှိတယ်…ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ပြခွင့် ရှိတယ် ဆိုတာဟာ ဆန္ဒပြသော အကြောင်းအရာတိုင်း မှန်ကန်တယ်လို့ အဓိပ္ပါယ်မထွက်ပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေ ဆန္ဒပြခွင့် ရှိတယ် […]
မဟာတနျးကြောငျးသူလေး အသုဘ မီးသွင်ျဂိုလျခါနီးအခြိနျတှငျ မိခငျဖွဈသူမှ နောကျဆုံးအနနှေငျ့ နမျးလိုကျသောအခါ
ကျောင်းသူလေး အသုဘ မီးသင်္ဂြိုလ်ခါနီး မိခင်မှ နောက်ဆုံးအနေ နဲ့ နမ်းလိုက်အချိန်မှာ ဖြစ်ရပ်မျိုး မကြုံကြပာစေနဲ့ တိုး တက်ခေတ်မီချင်တဲ့နေရာမှာလိုသလိုဆွဲယူ ခေတ်မီနေကြပြီး ရှေးဟောင်းအယူသည်းမှုတွေကိုတော့ မပစ်ပယ်နိုင်ကြသေးဘူး။ သေရွာပြန်လူတစ်ယောက်ကို လူနေရပ်ကွက်ထဲ ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုနိုင်ဘူးဆိုရင် အသုဘလိုက်ပို့တဲ့ လူတွေပါ ရပ်ကွက်ထဲ ပြန်မဝင်ခိုင်းပါနဲ့။ သူတို့တွေလည်း သင်္ချိုင်းကုန်းကို ရောက်ခဲ့ကြတာပဲလေ။လူကို လူလို့ပဲမြ င်ပြီး လူ အဖြစ် ပြန်အသိမှတ်ပြုပေးရမှာပါ့။ ကံကောင်းလို့ မသေပဲ အသက်ရှင်လျက် ပြန် ရရှိလိုက်တဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ဘာလို့ မကြိုဆိုနိုင်ကြတာလဲ။ ဘာလို့များ လူ့ အသိုင်း အဝိုင်းကို ပြန်ဝင်ခွင့် မပြုချင်ရတာလဲ။ ကဲ မလိုတဲ့ အယူအဆတွေ ပယ်ကြရအောင်ဗျာ။ ကြာနီကန် သုဿန်မှာ ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် ကုန်ထုတ် ဓါတုဗေဒ မဟာတန်းကျောင်းသူလေး […]
သငျ့အမညျပေါကျ အခှနျဆောငျထားသော ကား ပွနျရောငျးဖွဈခဲ့ပါလငျြ မဖွဈမနေ ဒါတှလေုပျပါ
သင့်အမည်ပေါက် အခွန်ဆောင်ထားသော ကား ပြန်ရောင်းဖြစ်ခဲ့ပါလျင် မဖြစ်မနေ ဒါတွေလုပ်ပါ 1။ ကားပြန်ရောင်းတာနဲ့ အခွန်ရုံးကိုသတင်းပို့ဖို့ပြင်ပါ 2။ အခွန်စိမ်းကို ဝယ်သူကို မပေးလိုက်ပါနဲ့ (အခွန်ရုံးကိုပြရမှာမို့) 3။ စာချုပ်ချုပ်ထားပါ (အခွန်ရုံးကိုပြရမှာမို့) 4။ ကားအုံနာဘုတ်နဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေကို မိတ္တူ ၃ စုံ ကူးထားပါ (အခွန်ရုံးကိုပြရမှာမို့) 5။ ကားဓာတ်ပုံရှေ့နောက်ဝဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပီးထုတ်ထားပါ (အခွန်ရုံးကိုပြရမှာမို့) 6။ အားလုံးစုံလျင် အခွန်ရုံးသွားပီး ရောင်းချပြီးကြောင်း သွားတင်ပြပါ။ အခွန်ရုံးမှ ဝင(၈) အခွန်လွတ်စာရွက်ထုတ်ပေးပါလိမ့်မယ် 7။ နောက်ကားတစ်စီးဝယ်လျင် အခွန်ရုံးမှ ထုတ်ထားသော ဝင(၈) အားပြလိုက်လျင် အခွန်မပေးဆောင်ရတော့ဘဲ မိမိအမည်သို့ အလွယ်တစ်ကူပြောင်းလို့ရပါမည် 8။ ကားဈေးအတက် အကျကြောင့် တန်ဘိုးဖြတ်နှုန်းထား တိုးလာလျင် မြတ်စွန်းခဲ့ပါက အမြတ်ခွန်ပေးဆောင်ရပါမည် 9။ ငွေဖြူထုတ်ရာတွင် […]
အမှန်တရားမပေါ်ပေါက်ပဲ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ဗစ်တိုးရီးယားလေး အမှု ဗစ်တိုးရီးယား လက်ရှိ အခြေအနေ ၁- နေပြည်တော် ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးက့ဒီဇင်ဘာ ၁၈ရက်နေ့မှာ အောင်ကြီးကို တရားရှင် လွှတ်လိုက်တဲ့နေရာမှာ ကာလစည်းကမ်း ကန့်သတ်ချက် ရက်၆၀အတွင်း အမှုကို ပြင်ဆင်ချက်နဲ့ ထပ်တက်လို့ ရတယ်လို့ ဆိုတာ ပါပါတယ်။ ဆိုလိုတာက အောင်ကြီးကို လွှတ်တာကို မကျေနပ်ရင် သက်သေ အထောက်အထားအသစ်နဲ့ အမှုကို ထပ်တက်လို့ ရတယ်လို့ ဆိုလိုတာပါ။ ဒီအတွက် ခရိုင်ဥပဒေရုံးနဲ့ အမှတ်(၁) မှုခင်းတပ်ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ အောင်ကြီးကို ဆက်လက် စွဲဆိုဖို့ ပြင်ဆင်ချက်နဲ့ တိုင်းဥပဒေရုံးကို တင်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တိုင်းဥပဒေရုံးက တရားရုံးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ မှန်ကန်တယ် ဆိုပြီး အောင်ကြီးကို ဆက်လက် စွဲဆိုခွင့် မပြုတော့ပါဘူး။ ၂- […]
ထီပေါကျခငျြသူမြား ထီကံကောငျးစဖေို့ အဓိဋ်ဌာနျ ပုတီးစိပျနညျး
လူတိုင်း ထီပေါက် ချင်ကြပါတယ် ….ဒါပေ့မယ့်် ထီဆိုတာ လူတိုင်း ပေါက်တာ မဟုက် သူကံဇာ တာ နည့် ကံပေါ် မူတည် ပြီး ပေါက်ကြတယ် ….အဲကံဇာ အပေါ်မှာပဲ ထီဆု ကြီး ထီ ဆုလေး လေးတွေ ထပ်ခွဲ ခြား သွားတာပေါ့ …. ဟိုတုန်းက. ဦးဘဟန် ဆိုတဲ့ အဘကြီး သူက. ထီကံအရမ်း စမ်းတာ ကျွန်တော် က. ကြ ထီတော့ ပေါက်ချင်တယ်…ဒါပေ့မယ် ထီထိုးရမှာ အလွန်ပျင်းတယ် …. ဦးဘဟန် ကမင်းကွာ ကံကို အလကား ဖြုန်းတီး ပစ်တာတဲ့ထီ မထိုးလို့ ပြောတာသူကထီလည်း အရမ်း ထိုးသလို ထီကံလည် အရမ်းကောင်း တာ တစ်နှစ်ကို […]
သတိထားသငျ့သော မိနျးကလေးမြား၏ ညို့ခကျြ (၈)ခကျြ…
သတိထားသင့်သော မိန်းကလေးများ၏ ညို့ချက် (၈)ချက် ညို့ချက် (၁) တစ်ချို့ မိန်းမတွေက မျက်နှာကို ချိုချိုလေး လုပ်ထားတတ်တယ်။ အဲ့ဒါယောင်္ကျားတွေကို စွဲဆောင်တဲ့ နံပါတ်တစ် “သိတံ” လို့ ခေါ်တယ်။ (မျက်နှာမြင် ချစ်ခင်ပါစေဆိုတဲ့ ရုပ်လေးတွေပေါ့ဗျာ) ညို့ချက် (၂) တစ်ချို့ကျတော့ အသံတိုးတိုးလေးတွေနဲ့ ရီပြတတ်တယ်။ အဲ့ဒါက ညှို့ချက်နံပါတ်နှစ် “ဟာသ” လို့ခေါ်တယ်။ (မကြားတကြားနဲ့ သတိထားရမယ့် ဆည်းလည်းသံလေးတွေပေါ့) ညို့ချက် (၃) တစ်ချို့ မိန်းကလေးလေးတွေကျတော့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရှေ့ကိုရောက်ရင်ကြောက်ပြ၊ စိုးထိတ်ပြတတ်တယ်။ အဲ့ဒါက ညှို့ချက် နံပါတ်သုံး “ဘယ”တဲ့။ (အားကိုးခံချင်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေအကြိုက်ပေါ့ဗျာ နောက်မှ(ညားပြီးမှ) မိန်းမကြမ်းကြီးဖြစ်နေတတ်မို့ သတိရှိ ဟိဟိ) ညို့ချက် (၄) တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဟန် လုပ်ပြတတ်တယ်။လျှာတစ်လစ်ထုတ်ပြတတ်တယ်။ အဲ့ဒါက […]